मोडेल, सुविधाहरू, मूल्यहरु: सौन्दर्य जोडती
Harvesters (cosmetology) skrabera र electroporation लागि गरिन्छ। केही मोडेल एक समारोह Microdermabrasion छ। Multifunction परिमार्जनहरू धेरै नलिका छ। मानक एकाइ ह्यान्डलहरू र विशेष फिल्टर संग आपूर्ति गरिएको छ।
औसत मा 12 मेगाहर्ट्ज गर्न मोडेल अल्ट्रासोनिक आवृत्ति। प्यारामिटर सीमा लहर एकदम फरक छ। कस्मेटिक harvesters बारेमा थप जानकारी पत्ता लगाउन, सबै भन्दा लोकप्रिय परिमार्जन छलफल गर्नुपर्छ।
विवरण नोवा 908 मोडेल
कस्मेटिक फसल नोवा 908 उच्च मांग छ। मोडेल गर्न Skrabera, तीन सुझावहरू छनौट गर्न छन्। सूचक prodelnoy तीव्रता अधिकतम6mA छ। फिल्टर एक धातु podkalkoy संग मानक रूपमा समावेश छन्। shugaring व्यवसायी लागि उपयुक्त ठीक हो। भने छाला द्वारा कस्मेटिक फसल धेरै ध्यान दिएर भन्छिन्।
electroporation यो अभाव सुविधा। मानक मा कपडा फिल्टर समावेश गरिएको छैन। Microdermabrasion लागि उपकरण ठूलो फिट। मुख्यतया यो टिप एक हीरा कोटिंग प्रयोग गरिएको छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। अधिकतम अल्ट्रासाउंड आवृत्ति 23 मेगाहर्ट्ज छ। 160 हजार rubles को लागि संयोजन गर्न सक्छन् भने सौन्दर्य किन्न।
कार्य नोवा 1002
यो मोडेल ज्यादातर राम्रो समीक्षा हुन्छ। Cosmetology संयोजन यो श्रृंखला लामो अडान संग गरेको छ। उहाँले प्लेट मा fastened र धेरै शायद तोड्न सम्हाल्छ। हामी तपाईंको उपकरणको सुविधाहरू कुरा भने, यो गहिरो skrabera को संभावना उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ छाला को द्रुत सफाई को लागि चुच्चो। यस मामला मा Electroporation प्रदान गरिएको छ।
मानक मिसिन संयोजन गर्ने cosmetology, निर्देशन र तीन धातु फिल्टर संग आपूर्ति गरिएको छ। अधिकतम लहर 80% छ। शक्ति घनत्व कस्मेटिक फसल वर्ग सेन्टिमिटरले प्रति 0.04 वाट भन्दा बढी छैन। अल्ट्रासोनिक आवृत्ति, मोडेल छैन उच्च छ। चुच्चो shugaring संग मानक आउँछ। यो श्रृंखला फसल सौन्दर्य किन्न रूपमा 130 हजार rubles रूपमा कम हुन सक्छ।
सोनिया 5001 मोडेल मापदण्डहरू
यो एक पेशेवर र Multifunctional सौन्दर्य संयोजन छ। ग्राहक समीक्षा यसलाई धेरै कार्यहरु छ भन्छन्। सतह skrabera मोडेल ठूलो फिट। को चुच्चो shugaring अन्तर्गत प्रदान गरिएको छ। बस उपकरण तीन धातु फिल्टर छ सेट। यस मामला को प्लेट बनाइएको मा सम्हाल्छ। उपकरण अल्ट्रासाउंड आवृत्ति 300 kHz छ। सीमा तीव्रता मात्र 80% बराबर छ।
Microdermabrasion लागि उपकरण सबै भन्दा राम्रो तरिकामा उपयुक्त छ। काम मोडेल दुई मोड मा गर्न सक्छन्। वर्ग सेन्टिमिटरले प्रति 0.03 वाट शक्ति घनत्व। यी कस्मेटिक harvesters (बजार मूल्य) 150 160 हजार rubles छन्।
अवसर सोनिया फसल 5003
Multifunctional कस्मेटिक फरक गुणस्तर कपडा फिल्टर संयोजन बताए। बस तीन knobs छन् सेट। सतह skrabera उपकरण ठूलो फिट। त्यहाँ पूरा उठाने लागि चुच्चो। प्यारामिटर सीमा लहर 88% पुग्यो। को cosmetology मा शक्ति घनत्व कम संयोजन। यस मामला मा, दराज को धारकों बनाइएको छ।
यन्त्र हीरा उपचारको लागि एकदम अक्सर प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक skraber मोडेल छैन। cosmetology मा पल्स मोड संयोजन प्रदान। चुच्चो परिवर्तन आवश्यक भएमा, धेरै सरल छ। अल्ट्रासोनिक आवृत्ति 20 मेगाहर्ट्ज अधिकतम पुग्छ। गहिरो skrabera एक समारोह छ। लगातार सञ्चालन निर्माता द्वारा प्रदान गरिएको छ। उपकरण Shugaring ठूलो फिट। सुंदरता फसल को सैलून मा एक धेरै खोजे-पछि छ। 144 हजार rubles को मूल्य मा प्रयोगकर्ता सक्नुहुन्छ मोडेल किन्न।
विवरण 5010 मोडेल सोनिया
यी harvesters (कस्मेटिक) धेरै लाभ छ। सबै ध्यान पहिलो व्यापक रुख दिनुपर्छ। उपकरणको Shugaring समारोह छ। आवश्यक छ भने, अनुहार सफाई लागि चुच्चो परिवर्तन गर्न सकिन्छ। संस्करण मा skrabera समारोह पनि छ। बस त्यहाँबाट चयन गर्न तीन धातु फिल्टर हो सेट। इच्छित भने, ह्यान्डल अगाडि मा तय गर्न सकिन्छ।
गहिरो skrabera कार्य निर्माता द्वारा प्रदान। अल्ट्रासोनिक आवृत्ति 23 kHz अधिकतम बराबर छ। cosmetology संयोजन अधिकतम तीव्रता 68% को स्तर मा छ। अन्न टाउको को डिग्री द्वारा एकदम भिन्न छन्। उपलब्ध कुल Microdermabrasion लागि तीन मोड चयन गर्न। कस्मेटिक फसल अनुपस्थित को मानक सेट मा कपडा फिल्टर। खरीद मोडेल मात्र 140 हजार rubles हुन सक्छ।
यो सौन्दर्य जोडती (6 1 मा) समारोह shugaring बनाइएको छ। अनुहार सफाई को लागि, त्यहाँ तीन सुझावहरू छनौट छन्। यस मामला मा फिल्टर, म धेरै सरल हुन सक्छ। होल्डरलाई मा माउन्ट cosmetology फसल मा ह्यान्डल। गहिरो skrabera उपकरण सबै भन्दा राम्रो तरिकामा उपयुक्त छैन।
मोडेल को electroporation सुविधा उपलब्ध छैन। बस सेट पाउन सकिन्छ दुई धातु फिल्टर। त्यहाँ खुट्टा को चुच्चो सफाई। यस मामला मा बिट, अनाज धेरै भिन्न छन्। दर सीमित तीव्रता4mA छ। भन्यो कस्मेटिक फसल लागि मूल्य वरिपरि 170 हजार rubles छ।
मोडेल मापदण्डहरू "एमआईटी-12"
यी harvesters (सौन्दर्य) सुसज्जित गहिरो skraber लागि चुच्चो संग। कुल, त्यहाँ चार धातु फिल्टर को एक मानक सेट छ। उठाने लागि इच्छित संलग्न परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने। प्यारामिटर अल्ट्रासोनिक आवृत्ति 20 मेगाहर्ट्ज अधिकतम पुग्छ। Microdermabrasion लागि उपकरण गरिबी फिट।
तथापि, निर्दिष्ट प्रोसेसर मा कपडा फिल्टरले cosmetology छ। को ह्यान्डल उपकरण होल्डरलाई मा माउन्ट। सुझाव हीरा-टिप दिनुभयो प्रयोग shugaring। तपाईं खरीदार को समीक्षा विश्वास भने यो ठीक copes छाला सफाई।5mA को प्यारामिटर सीमा तीव्रता।
मात्रा को लहर काउन्टर देखाउँछ। मोडेल लगातार लामो समयसम्म काम गर्न सक्षम छ। कोमल skrabera लागि उपकरण सबै भन्दा राम्रो तरिकामा उपयुक्त छ। नलिका विघटन को एक उच्च डिग्री संग प्रदान गरिन्छ। पसलमा सुंदरता 155 हजार rubles को लागि खरिद गर्न सकिन्छ जोडता।
को "एमआईटी-16" संयोजन को संभावना
यो कस्मेटिक फसल दुई ह्यान्डलहरू संग निर्मित। कोमल skrabera लागि उपकरण ठूलो फिट। विशेष ध्यान मोडेल मा एक कपडा फिल्टर दिइएको छ। उपकरणको Microdermabrasion समारोह छ। इच्छित भने, ह्यान्डल interchanged गर्न सकिन्छ। अधिकतम अल्ट्रासाउंड आवृत्ति 20 मेगाहर्ट्ज छ। त्यहाँ अगाडि मा लहर मात्रा।
समारोह कुनै न कुनै skrabera निर्माता प्रदान। उपकरण Shugaring unambiguously फिट गर्दैन। को cosmetology मा शक्ति घनत्व वर्ग सेन्टिमिटरले प्रति 0.2 वाट अधिकतम संयोजन। तपाईं ग्राहक समीक्षा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, शुद्ध पार्नुभएर अनुहार मोडेल छाला पूर्ण copes। सौंदर्य सैलून मा उपकरण उच्च मांग छ। यो श्रृंखला मा संयोजन रूपमा 173 हजार rubles रूपमा कम हुन सक्छ सौन्दर्य किन्न।
मोडेल विवरण Biotek 1002D
यी harvesters (कस्मेटिक) धेरै लाभ छ। सबै को पहिलो यो मोडेल एक उच्च गुणस्तरीय स्वागत सुसज्जित छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। कुल, कलम तीन मानक सेट छन्। प्रकाश सिस्टम प्रकाश-उत्सर्जक डायोड प्रकार प्रयोग गर्दछ। कस्मेटिक फसल मा लगातार सञ्चालन प्रदान।
कपडा फिल्टर मानक सेट मा समावेश छन्। हीरा Microdermabrasion लागि उपकरण ठूलो फिट। नरम skrabera समारोह प्रदान गरिएको छ। दर लगभग4mA को हाशिये दर बराबर। लहर मात्रा प्रति देखाइएको। मोडेल को electroporation सुविधा उपलब्ध छैन। रूपमा सानो 140 रूपमा हजार rubles हुन सक्छ यो सौन्दर्य मिसिन किन्न।
कार्य Biotek 1022D
यी कस्मेटिक भद्दा अनुहार लागि ठूलो जोडती। उपकरणमा skrabera सतह सुविधा छ। नाडी आवृत्ति 90% अधिकतम पुग्छ। तपाईं ग्राहक समीक्षा विश्वास छ भने, चुच्चो सजिलै interchanged गर्न सकिन्छ। यस मामला मा ह्यान्डल एक ओभरले प्रयोग गरिएको छ। cosmetology मा तीव्रता प्यारामिटर5भन्दा कम microamps संयोजन।
उपकरणको टिप मात्र एक छ। उठाने लागि यो ठूलो फिट। समारोह गहिरो skrabera मोडेल छैन। Microdermabrasion लागि चुच्चो त्यहाँ समावेश। अल्ट्रासाउंड आवृत्ति 23 kHz अधिकतम पुग्छ। कपडा फिल्टर यो कस्मेटिक फसल अनुपस्थित छन्। खरीद मोडेल रूपमा 160 हजार rubles रूपमा कम हुन सक्छ।
मोडेल मापदण्डहरू Biotek 1040D
यो सौन्दर्य फसल धेरै संलग्नहरू संग बेचे। उहाँले होल्डरलाई अडिएको सम्हाल्छ। स्वागत पल्सेशन मात्रा बनाइएको छ। कपडा फिल्टर मोडेल देखि हराइरहेका छन्। गहिरो skrabera उपकरण राम्रो तरिकाले फिट। Microdermabrasion समारोह हराइरहेको छ। मोडेल को लगातार सञ्चालन उपलब्ध छ। कुल तीन धातु फिल्टर को एक मानक सेट छन्।
ह्यान्डल रबर पैड संग सेट। समारोह सफ्ट skrabera अनुपस्थित। कम्तिमा5मेगाहर्ट्ज बराबर को अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेन्सी। प्यारामिटर सीमा तीव्रता5mA एक तहमा छ। पसलहरुमा यो सौन्दर्य प्रोसेसर 144 हजार rubles मूल्य हो।
अवसर संयोजन रजत फक्स
अन्य मोडेल देखि कस्मेटिक फसल रजत फक्स आफ्नो बहुमुखी द्वारा प्रतिष्ठित छ। बस त्यहाँ skrabera लागि पाँच सुझावहरू छन् सेट। मोडेल को Microdermabrasion समारोह छ। इच्छित भने, ह्यान्डल reordered गर्न सकिन्छ। अस्तर तिनीहरूले सम्पूर्ण रबर बनेको छन्। कपडा फिल्टर एकदम बाक्लो प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ लुगा धुने लागि रूपमा मानक नली। निर्माता अनुहार सफाई समारोह प्रदान गरिएको छ।
प्यारामिटर अल्ट्रासोनिक आवृत्ति 20 मेगाहर्ट्ज अधिकतम छ। प्यारामिटर सीमा लहर 0.4 ua एक तहमा छ। धातु फिल्टर कस्मेटिक यो संयोजन प्रदान छैन। सतह skrabera सुविधा हराइरहेको छ। तर, यो मोडेल विघटन को एक उच्च डिग्री संग एक चुच्चो छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। रूपमा 164 हजार rubles रूपमा कम हुन सक्छ यो सौन्दर्य मिसिन किन्न।
मोडेल 5050 बेल्जियम को विवरण
कस्मेटिक सक्रिय फसल उच्च काउन्टर अलग छ। होल्डरहरू छेस्कनी fastened थियो। आवरण प्लेट संग तीन ह्यान्डलहरू छ बस उपकरण सेट। यस मामला मा बिट विघटन को डिग्री बदलिने प्रयोग गरिएको। इच्छित भने, अनुहार सफाई को लागि फिल्टर परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक आवृत्ति 23 मेगाहर्ट्ज अधिकतम बराबर छ। कस्मेटिक मा कपडा फिल्टर त्यहाँ संयोजन। लगातार सञ्चालन निर्माता द्वारा प्रदान गरिएको छैन। समारोह Microdermabrasion उपकरण अफलाइन छ। यो सौन्दर्य फसल लागि मूल्य वरिपरि 130 हजार rubles छ।
हल सेन्सर कसरी जाँच गर्ने? हल सेन्सर - फोटो, मूल्य, प्रतिस्थापन
एक शुरुवात लागि एसएलआर क्यामेरा कसरी चयन गर्ने?
यो लुगा धुने मेसिन लागि हीटर: प्रतिस्थापन। कसरी लुगा धुने मेसिन बाट हीटर हटाउन?
डिज्नील्याण्ड गर्न पर्यटन, परी कथा जीवित
VAZ-2107 चुलो गरिबी heats? उपकरण चुलो VAZ-2107। आफ्नै हातले ताप कूलर VAZ-2107 प्रतिस्थापन
जहाँ तिनीहरूले "तीतो" खिच्नुभयो? सुरम्य परिदृश्य र irrepressible आनन्द